Nri ndị dị a haveaa kachasị arụ ọrụ ọkụ? - Ihe Oriri
Isi > Ihe Oriri > Thermic food food - otutu ngwọta
Thermic food food - otutu ngwọta
Nri ndị dị a haveaa kachasị arụ ọrụ ọkụ?
Culinary nutritionist Trudy Stone kwenyere, 'Akwa bụ otu n'imekacha mmaisi mmalite nke protein na-ere ọkụ nke ga-emenwetaarụ ọrụ gị gbadara.Usoro nrielu na proteinnweee gosiri mbo mbuli gị metabolism, n'ihi nammetụta okpomọkụnkenriOfkè calorie na-ere n’ahụ́ iji mejupụta ihenri. '27bọchị 27 2019
Yabụ kedu nke na-eme? Na-agwa m na ị nwere ike ịmekwu calorie ka ị na-eri nri? Eeh, na agam anaghi anwa iduhie gi site na keton. (High tempo music) Hey Jim Schultz si n'aka F-Cubed na livefucbed .com.
Na hey nwoke ma ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ gị na-ekele gị. Tupu anyị ebido, ị kwesịrị ịmịkọrọ ntakịrị ihe ahụ na bọtịnụ ka anyị bido. Taa, anyị ga-ekwu maka mmetụta okpomọkụ nke nri, nke bụ isi bụ azịza nye ajụjụ a, gịnị bụ TEF? Mmetụta ọkụ nke nri.
Na hey mmadụ, unu nọnyeere m ruo ọgwụgwụ. N'ihi na enwere m osisi mgbatị cardio n'efu nke ị nwere ike ibudata taa nke ga-agbaze agbaze n'ụzọ nkịtị Kwuo ihe, mana maka nwoke ziri ezi, ị ga-enwe obere mpempe akwụkwọ abụba ndị dị n'akụkụ igwe cardio nke ndị otu mkpocha agaghị enwe obi ụtọ Bụrụ nke gị. Yabụ dị oke njọ, ị nwere ike ịmịkwuo calorie si na nri ị na-eri? Kpomkwem, na mmadụ, Anọ m na ụwa ahụike maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 ugbu a ọ were m oge iji chọpụta, nke a bụ ihe m na-echeghị na ọtụtụ mmadụ maara.
Ihu ọma, ọ bụ maka mmetụta ọkụ nke nri. Mmetụta okpomọkụ nke na-edozi ahụ gị. Ya mere, naanị iri calorie bụ ọrụ ọkụ na-ere calorie.
free igwe vs igwe ọmụmụ
Ọ bụghịkwa nri niile ka ha nhata. Echere m, enwere mmetụta dị ọkụ nke nri dị iche iche. Enwere nnukwu ọdịiche dị na nsonaazụ ọkụ nke protein na nsonaazụ ọkụ nke, sịnụ, carbohydrates na-abụghị fibrous.
Mmetụta ọkụ nke ndị na-edozi ahụ dị ka ọkụkọ ma ọ bụ mmetụta dị ọkụ nke carbohydrates fibrous dị ka mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, nke nwere ike ịbụ 25%. Nke ahụ pụtara n'ụzọ nkịtị na ahụ gị na-ere ihe ruru 25% nke calorie na nri naanị iri nri. N’ụzọ dị iche, ị maara carbohydrates na-abụghị nke fibrous, dị ka pop tart.
Naanị ị maara atọ, anọ, ma eleghị anya pasent ise. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-eri apụl. Ka anyị kwuo na ị na-eri apụl calorie 100, nke bụ mkpụrụ osisi nwere nnukwu eriri.
Ahụ gị nwere ike ịnara naanị 80 ma ọ bụ 85 nke calorie ndị a. Know mara, sịnụ, kuki chọkọleti na - enweghị isi. Ahụ gị nwere ike ịma 96, 97, ma ọ bụ 98 nke calorie 100 ahụ maka ngụkọta, m na-ekwu na ha abụghị.
Ma ọ bụrụ na ị na-eme nke a n'oge nri ọ bụla, ugboro anọ, ugboro ise kwa ụbọchị, maka izu na ọnwa, nsonaazụ ya ga-adị oke iche. Foods ụdị obi dị ka ndị a metabolism boosters - ha dị nnọọ ka ha na-amụba gị metabolism Ọfọn, ka na-aga. Echere m, kedu ihe kpatara na onye ọ bụla na-arụ ụlọ ji arụ ọrụ bara uru na poteto dị ụtọ mgbe niile nwere ọkụkọ na broccoli na otu nri ha? Okpomoku ihe oriri, nwanne.
Ọ bụ ya. Ajuju na azịza nwa ka anyi zute Ajuju nke mbu, ya mere emeela kalori nile kee? Ọfọn, ee na ee e. Na njedebe nke ụbọchị, kalori bụ naanị otu ike.
Ma calorie skwọsh na kalori ka ga-adị ntakịrị. Ajuju nke abuo ka i na agwa m? na ketones ndị a nke Dr. Oz na-eme ka ọ dị adị? Nke ahụ ọ bụ ajụjụ dị mkpa? N'ikpeazụ, ajụjụ nke atọ, yabụ Jim, ọ bụrụ na m nụrụ nke ọma, nwoke, ana m anụ nke ahụ.
Ọ bụrụ na m rie ụyọkọ? Ejiri eriri, na-adọwa m. Ee, ị bụ. Have ga-azụta uwe elu ọhụrụ.
Ga-azụta uwe ogologo ọkpa ọhụrụ. You'll ga-agbanyekwa oge niile. Hey ekele ụmụ okorobịa, enwere m olileanya na ị nwere obere obere ọchị a.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmasị ya, kekọrịta ya ma ọ bụ denye aha, ị mara na m ga-enwe ekele maka ya. Ma nke na-esote bụ obere oge izipu HIIT na-atọ ụtọ emere m na Florida summer summer. (Obi ụtọ na piano music)
Kedu nri ndị na - enyere aka gbaa abụba afọ?
Ma enwere otutunrindị ahụ dị mma maka uto gị na eriri gị. HaEnyemakaị na-alụ ọgụafọ abụba.
Mkpụrụ osisi ahụ nwere milligrams 422 nke potassium, ịnweta nke nwere ikeEnyemakaamachi ego nkeafọọzịza sodium na ahụ gị.
Mmiri ara ehi chọkọletị.
Jenụwarị 17 2011 r.
You gbalịrị ifelata ma enwebeghị nnukwu ihe ịga nke ọma Ọ bụrụ na ị bụ, ị nọghị naanị m achọtala n'ọtụtụ oge na, n'ọtụtụ ọnọdụ, enwere ụfọdụ nri anụ ụlọ ndị mmadụ na-adabere ma dabere na N'isiokwu a anyị na- Aga m agafe ihe oriri iri ịchọrọ ịchụpụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga nke ọma, a bụ m Dr. Eric Richardson, onye dọkịta na-ahụ maka izugbe nke mba niile Achọrọ m ịkele gị ọwa Family Med nke gbadoro anya na iweta ị bara uru na ezi ozi ahụike iji nyere gị na ezinụlọ gị aka ma ọ bụrụ na ị chere na nke a bụ ihe maka gị aka bụ ijide n'aka na ị debanyere aha, pịa bọtịnụ ngosi ma soro unsokay dị mkpa mana ọ bụ naanị obere akụkụ nke eserese ọ na-agbada n'ezie ịchọta ụzọ ị ga-esi rie ya na gị na ahụ gị, mana n'agbanyeghị ụdị nri na-edozi ahụ ị họọrọ mgbe ị na-achọ ifelata, enwere ụfọdụ nri anyị maara na ọ ga-etinye gị na nsogbu ugbu a. Ndepụta a agaghị agwụ ike n'ihi na n'eziokwu, enwere ọtụtụ nri si ebe ahụ.
Ọ dịghị mma maka gị, mana ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị m na-ahụkarị na ndị ọrịa m. Nke mbụ bụ otu n'ime ihe ndọghachi azụ m nke bụ french french na poteto ibe ma na-agbada n'ụzọ dị mfe n'ime ahụ ma gbanwee shuga ma nwee ike gbanwee abụba ngwa ngwa. Ọtụtụ ọmụmụ na-egosi na ị na-eri fries nke french na poteto ibe na uru bara uru, otu gosipụtara na mkpụrụ nduku nwere ike itinye aka na uru bara ụba karịa karịa nri ọ bụla ọzọ, ma ọ dịkarịa ala dị mkpa mgbe ị na-anwa ịtalata, na ọnụọgụ abụọ nke nwere sugary abụọ Ihe ọ areụụ na-abụ nke nwere ike ịbụ nke mbụ dịka pr nwere ike bụrụ otu n'ime ihe kachasị njọ nye gị nke anyị na-eri mgbe niile.
Ha nwere njikọ chiri anya na uru bara uru.Ọmụmụ ihe m gụrụ n'oge gara aga gosiri na ị nwere ike ịnweta 10 pound kwa ụbọchị na soda na-enweghị nri n'ime otu afọ mgbe ọ dị elu na calorie mana ụbụrụ gị amataghị ya dịka nri ya anaghị eme ka ị bụrụ mkpụrụ obi na ọ ga-abụrịrị na ị ga-eji ike gị kpochapụ ya wee mee onwe gị ihu ọma ma rapara na mmiri dị jụụ na lemon, ugbu a, nke atọ bụ achịcha ọcha bụ achịcha ọcha bụ achịcha chawable nke shuga na-a whenụ mgbe ọka wit kwa Mgbe a na-edozi ntụ ọka ọcha, ọ na-ewepụ ọtụtụ eriri na nri ndị na-eme ka ọka ahụ jiri nwayọọ nwayọọ gbarie ma nwee ike rie karịa ya, yabụ anyị na-ahụ nhụjuanya na-esote na insulin gị nke bụ onye iro gị mgbe ị na-achọ ịkwụsị ibu. , n'agbanyeghị na tochọrọ iri nri Gbaa mbọ hụ na ị na-eri ọka niile ma na-eme ka akụkụ ahụ dị ala - nke anọ ekwesịghị ịbụ n'ezie enweghị ike iwere ya dị ka nri, mana ụfọdụ bụ nnukwu ọnwụnwa - ụlọ mmanya n'ezie enweghi ahụ ike na ha zuru oke ngwakọta nke ntụ ọka na mmanụ a nụchara anụcha - enweghị ọtụtụ nri ndị ọzọ nwere ike ibute ọtụtụ calorie n'ime obere ngwugwu otu esi achọta swiiti mmanya ọ bụla. Ihe kachasị njọ banyere ha bụ na a na-etinye ha n'ọnọdụ dị iche iche na ụlọ ahịa ka ọ bụrụ na mgbe ike gwụrụ anyị ma chere n'ahịrị, ha nọ ebe ahụ iji guzogide ọnwụnwa ahụ wee zere ha, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga n'ihu na gị ihe mgbaru ọsọ nke ise mgbe ụfọdụ aghụghọ ụfọdụ n'ime anyị iche na ọ dị mma ma nke a bụ ihe ọ juiceụ juiceụ mkpụrụ osisi bụ ụzọ dị mma iji lekọta ndị nwere ezé dị ụtọ ma na imeru ihe oke bụ akụkụ dị mma nke nri ugbu a Nsogbu Bụ Mgbe Anyị Na-arinkụ Ọ dị ka ihe ọ Juụ Juụ Nsogbu mbụ bụ na ọtụtụ n'ime ihe ọ fruitụ fruitụ mkpụrụ osisi a na-ere ere abụghị naanị ihe ọ juiceụ juiceụ, Kasị njọ, mana ọbụlagodi na ọ bụ 100 ihe ọ juiceụ juiceụ, ọ ka nwere ike ijide gị mgbe ị na-achọ iburu ibu ka ị tufuo.
Nsogbu bụ na mgbe ị na-eme ihe ọ theụ theụ, ị na-ewepụkarị pulp, eriri, na ihe ndị ọzọ na-eso mkpụrụ osisi n'onwe ya ka ahụ gị wee banye shuga, mụbaa insulin gị, ma mee ka ị buru ibu n'ihi na ị nọ ' t niile mmezi Inwe eriri na-eme ka ọ dị mfe karị iri calorie karịa ma ọ bụrụ na ị rie mkpụrụ osisi Nyefee mkpụrụ osisi na iko n'ụtụtụ nọmba isii bụkwa nke na-ewetara m ọtụtụ na nke ahụ achịcha dị iche iche na achịcha enwere Cafe dị otu frenti achịcha achịcha dị na Salt Lake City nke a na-akpọ Gourmets na ọ bụrụ na ị nọ na mpaghara ahụ, akwụsịla ka ị ga-atụfu ụgbọ nri gị ebe a ọ bụ ihe ịtụnanya mana ọ bụrụ na ị gbalịa ọzọ, ọganihu na ịdị arọ gị njem Iji mee nke a, ụdị ihe ndị a agaghị ewetara gị ebe ị chọrọ ịga, ha jupụtakwara n'ụdị ifuru su gar sand a nụchara anụcha na mgbe mmanụ na-Reallybanye n'ụzọ nke Ebumnuche Gị Ọtụtụ n'ime ụdị ahịa echekwara juputara na abụba trans, nke na-emerụkwa ahụ r cholesterol na ọrịa obi mgbe ị richara ha ọnụọgụ asaa bụ mmanya na-aba n'anya na biya niile anyị maara afọ biya na enwere ezigbo ihe kpatara biya ahụ dị ka soda ma ọ bụ ihe ọ otherụ otherụ ndị ọzọ nwere shuga ọ dị elu na carbohydrates, dịka ihe ọ bụla ọzọ anyị na-ekwu maka taa ga-eme ka ogo shuga dị n'ọbara gị, nke na-ebute nzaghachi insulin, na uru a bara ụba. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ifelata ị nwere ike ịtụle ịbelata mmanya na-aba n'anya, ịhapụ ya niile ọnụ ọgụgụ asatọ bụ ihe ọzọ na-atọ m ụtọ, mana ọ ga-ebute gị nsogbu ngwa ngwa, akpọrọ m ya asị ma ọlị ikwu mana ọ bụ ice cream, o nweghi ihe dika bo wl nke ice cream ma o di nwute na odighi ezigbo ahu ike o di nnukwu calorie na obere shuga di obere nwere ike odi nma na oge ma nsogbu bu na odi nfe bu iri otutu nri n’otu oge dị ka ice cream gị na iji obere shuga na ihe ndị ọzọ na-edozi ahụ nwekwara ike inye aka jeere ya ozi na obere efere ma ghara iri nri ọzọ ka i wee mee ka ọrụ gị dị obere, nke na-aghọ nọmba itoolu na-enye m nsogbu na ụmụ m na nke ahụ bụ Pizza, anyị niile hụrụ iberi pizza n'anya, mana ọ dị nnukwu kalori ma ọ na-abụkarị site na ntụ ọka a nụchara anụcha na anụ etem esichara n'ihi na ọ dị mfe iriju oke bụ naanị ngwakọta zuru oke nke carbohydrates na abụba na-adịghị mma na nke ahụ bụ ihe na-eme ka anyị banye iji nwee nsogbu na nhọrọ ka mma ma ọ bụ mgbe ụfọdụ ụfọdụ kọlịflawa jikọrọ ọnụ ma ọ bụ nwee eriri dị mkpa ma ọ bụ mee ya n'ụlọ na-enwekwu ọka na ahụike toppings na-enweta ọtụtụ ndị nọ na nsogbu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ida ibu, ị ga-ezere kalori kọfị na-a drinksụ ihe ọ starụ starụ kpakpando. 'enyi gị bụ otu n'ime ndị omempụ kachasị na menu ha bụ mochacookie crumble frappuccino nnukwu ihe ọ drinkụ drinkụ ha nwere nnukwu calorie 590, ọ nwere gram 26 nke abụba na gram 76 nke agaghị enyere gị aka ịbanye n'ụsọ mmiri ịchọrọ. iyi, n'ezie ụdị ọ bụla nke mmiri mmiri efu efu agaghị enyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị yabụ pụọ na ahịrị Starbucks. Zoputa onwe gi otutu ego na otutu calorie kariri.
Dịka ị pụrụ ịhụ na ndepụta a, e nwere ọtụtụ ihe jikọrọ nri ndị anyị tụlere. Ndị a bụ nri na-ahụ maka oke oke oke oke anyị ugbu a, mana ọ nwere ihu ọma ị nwere ike ịhapụ ha - anaghị m eri ụdị ihe a, mana ha ekwesịghị ịbụ akụkụ nke nri gị. Lee aha mmado.
Zere nri ndị agbakwunyere sugar na abụba y pụọ na ihe ndị a na-edozi, ka ị na-abịaru nso nri niile, ọ ka mma ka ị na-eme doso Ugbu a na ị maara 10 nke nri kachasị elu iji zere iji nyere gị aka ịkwụsị ibu nri ndị ọzọ dị ebe ahụ na ị kwesịrị izere ya mere ajụjụ anyị nke ụbọchị bụ ihe bụ ihe kacha sie ike ịhapụ bụ nke na-egbochi gị ebumnuche iri nri ahụike gị, mee ka anyị mara na nkọwa dị n'okpuru ma ọ bụrụ na ịchọta nke a nyere aka, wepụta oge iji nye nke a edemede ozugbo ma soro ndị enyi gị kerịta ya, ọ ga - enyere ọwa anyị aka itolite ma rute ndị ọzọ nwere ike ịchọrọ nke a na ndụ ha. Ọ bụrụ na ịmebeghị ya, ahapụla na-enweghị ịdenye aha na ịkụ bọtịnụ ngosi ka ị ghara ịhapụ ọdịnaya ọ bụla n'ọdịnihu, mana ruo oge ọzọ enwere ezinụlọ Dr. richardson ma cheta ilekọta ahụ gị n’ihi na ọ bụ naanị ya nwere ya
Kedu ka esi eme ka ihe oriri siwanye ike?
Ihe akaebe na-egosi na TEF bụmụbarasite na ibunrinha (ma ọ bụghị ugboro ugboronri), oriri nke carbohydrate na protein (ma ọ bụghị abụba na-eri nri), yana usoro nri sitere na obere osisi. Afọ na mmega ahụ nwekwara ike ịrụ ọrụ na TEF.Eprel 25 2019
mmanụ a honeyụ dị mma karịa shuga
Àkwá bụ nri na-ekpo ọkụ?
Onye ọ bụlaakwanwere ihe karịrị 6g nke protein, na-eme ka ha bụrụ nhọrọ kachasị mma makaihe oriri na-ekpo ọkụna-eme ka metabolism.Eprel 14 2021
Nri, enwere mmetụta na-ekpo ọkụ?
Ihemmetụta okpomọkụnkenribụ otu n'ime ihe ndị mejupụtara metabolism yana izu ike nke metabolic na mmega ahụ. A na-ejikarị atụmatụ nkemmetụta okpomọkụnkenribụ ihe dị ka 10% nke caloric oriri, ọ bụ ezie nammetụtadịgasị iche iche maka iche ichenriakụrụngwa.
Osikapa ọ bụ nri na-ekpo ọkụ?
Ihe dị ka carbohydrates dị mgbagwoju anya dị ka akwụkwọ nri, ọka niile, aja ajaosikapa, agwa, na oatmeal na-adịghị edozi ahụ nwekwara nnukwuihe onodu okummetụta nke gburugburu 20%.21bọchị 21 2013
Gịnị mere akwa ji bụrụ nri na-egbu mmadụ?
Akwanwere amino acid nile di nkpa, na onu ogugu. Nke a pụtara na ahụ gị nwere ike iji protein na yaakwamaka mmezi na metabolism.Iri nriprotein dị elunriEgosiputala iji bulie metabolism site na rue 80-100 calorie kwa ubochi, site na usoro a na akpo thermic effect ofnri(13, 14).Ọkt 31 2016
Kedu ihe omume mmega ahụ nke mmega ahụ?
Ihemmetụta okpomọkụ nke mmega ahụ(TEPA) bụ ọnụọgụ ike niilemmega ahụ, nke gụnyere ihe niile site na iguzo ọtọ site na ọnọdụ ịnọdụ ala na nkuzi ọzụzụ kachasị dị ike kachasị elurụpụta(na ihe niile dị n’etiti). TEPA nwere ike ịdị site na 15 ruo 30% nke TDEE.June 7. 2017 Nọvemba
Kedu macronutrient nwere mmetụta kachasị emetụ n'ahụ?
Na nke a, elu-protein nribukachaihe na-ekpo ọkụ, ma e jiri ya tụnyere nri dị elu na carbohydrate na nri lipid, ebe nri carbohydrate dị ka ọ na-abawanyemmetụta thermogenickaria iri nri di elu, ma ihe omumu bu esemokwu.
Oatmeal ọ bụ nri ọkụ dị elu?
Ihe dị ka carbohydrates dị mgbagwoju anya dị ka akwụkwọ nri, ọka niile, aja ajaosikapa, agwa, na enweghị usorooatmealnwekwara aakwa igwemmetụta nke gburugburu 20%. Abụba nwere obereihe onodu okummetụta, naanị gburugburu 3%. Ahụ gị chọrọ abụba nri maka ọrụ dị iche iche nke ahụ. Ha dị mkpa maka ahụ dị mma.21bọchị 21 2013
Gini mere osikapa ji adighi gi nma?
Iheosikapaosisi na-agbakọba arsenic karịa ọtụtụ ihe ọkụkụ ndị ọzọ. Nke a ghọrọ nsogbu ebe ala ma ọ bụ ebe mmiri sitere na arsenic metọọ. Nnukwu ọgwụ arsenic jikọtara ọnụọgụ nke kansa, ọrịa obi na ụdị ọrịa shuga abụọ.Ọkt 16 2018
unyi wulie ugwu igwe
Kedu nri ị ga-eri iji nyere aka na mmetụta ọkụ?
Ebe ọ bụ na protein nwere ike ịnwe TEF dị ka 30%, na-eme ka ị rie nri protein dị elu nwere ike inye aka bulie metabolism gị. Gụnye ụfọdụ protein, dịka anụ, anụ ọkụkọ, azụ, àkwá, mmiri ara ehi, ma ọ bụ ihe ndị na-enye protein dị ka mkpo, lentil, akụ, na mkpụrụ, na nri ọ bụla.
Kedu ihe Mmetụta Na-ekpo ọkụ nke iri nri?
Mmetụta okpomọkụ nke nri bụ oke ike ọ na-ewe iji mebie, gbari, mejupụta, wee banye nri. Mgbe ụfọdụ a na-akpọ Specific Dynamic Action (SDA) na ihe oriri na-akpata thermogenesis, mmetụta nke thermic bụ akụkụ dị ukwuu nke ọnụ ọgụgụ metabolic, yana mmụba nke okpomọkụ na-egosi iji bulie metabolism thermogenic mgbe ọ richara nri.
Kedu ihe kpatara nri thermogenic ji dị mma maka ahụ?
Nri Thermogenic nwere ihe nwere ike ime ka metabolism gị dị elu ma ọ bụ nwee abụba ma ọ bụ protein; nke na-achọ ike ume iji gbarie yabụ, bulie metabolism gị. Mgbe ị na-eri nri na-eri ike na nri ikuku, echiche a bụ na ọbụlagodi mgbe ị na-ezu ike, ọnụọgụ metabolic gị ga-adị elu. A na-akpọ nke a 'mmetụta thermic.'.